Ratsy ho an'ny SEO ve ny lahatsoratry ny vahiny?
Alarobia 27, 2014 Alakamisy, Aogositra 28, 2014 Douglas Karr
Rehefa mikasa ny hampivelatra atiny ho an'ny tranokalanao ianao, dia fanamby hatrany ny mitazona ny faniriana atiny lehibe. Mety halaim-panahy ianao hanaiky bilaogera vahiny indraindray ho an'ny bilaoginao.
Isan'andro sy isan'andro isika dia mahazo tolotra handoavam-bola ho an'ireo lahatsoratra tohanan'ny mpanohana ary koa ny fangatahana hafatra ho an'ny vahiny. Nizaha lahatsoratra efa nandoavam-bola volana maro lasa izay izahay ary nijanona avy hatrany - Gaga aho raha manana ambiny ampahibemaso izahay. Mahatsiravina hatrany ny kalitao, tsy nifantoka velively ho an'ny mpihaino anay ny atiny, ary ny tanjona dia ny hivarotra hatrany fa tsy hanome lanja ny mpamaky anay mihitsy. Mbola alefa ny lahatsoratra vahiny fa mila manombatombana aho fa iray isan-jato na roa fotsiny no havoaka.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, Matt Cutts an'ny Google dia nanome izao fampitandremana manaraka izao:
Eny ary, antsoiko hoe: raha mampiasa bilaogy vahiny ianao ho fomba hahazoana rohy amin'ny 2014, dia tokony hijanona ianao. Nahoana? Satria rehefa mandeha ny fotoana dia nanjary fomba fanao spammy hatrany hatrany izany, ary raha manao bilaogy vahiny be dia be ianao dia miaraka amin'ny orinasa tena ratsy. Raha tamin'ny andro taloha, ny bilaogin'ny mpitsidika dia zavatra mendri-kaja taloha, toy ny nahazo mpanoratra notadiavina sy hajaina hanoratra ny fampidirana ny bokinao. Tsy izany intsony.
Ka… ny bilaogin'ny mpitsidika dia tsy manimba ny kalitaon'ny atiny fotsiny, fa mety hisy fiatraikany amin'ny laharan'ny tranokalanao amin'ny motera fikarohana!
Androany hariva, naharay Word Document aho izay nanana lahatsoratra somary tsy manam-paharoa nosoratana hodinihina ho an'ny bilaoginay. Nahaliana ahy izany satria tsy nahazo ilay lahatsoratra aho raha tsy tamin'ny adihevitra nifanaovana tamina matihanina momba ny fifandraisana am-bahoaka na ilay orinasa nosoratanay. Novakiako ilay lahatsoratra ary tena tsara izany - manome ohatra amin'ny fampielezana mailaka tokana. Ho toy ny fanamarinana, dia nalaiko ny fehintsoratra fanokafana ary apetako ao amin'ny Google hahitana raha nisy atiny navoaka tany an-toeran-kafa.
Niteraka zavatra somary nampatahotra izany. Tsy manam-paharoa ilay lahatsoratra, fa tamin'ny ankapobeny dia klone tamin'ny lahatsoratra iray nosoratana taona vitsivitsy lasa izay izay nahasarika ny sain'ny maro. Nanana fehezanteny mitovy amin'ny santionany nohavaozina aho. Tsy kopia mitovy io ary mety nandalo fitaovana toa an'i Copyscape aza… saingy tsy niavaka io. Na iza na iza mpanoratra dia nahavita asa tena tsara izy tamin'ny fanavaozana ny ohatra sy famerenana an-tsoratra ny lahatsoratra ampy mba tsy hahitana azy.
Mazava ho azy fa tsy hamoaka ilay lahatsoratra izahay. Ankoatry ny infografika, ny lahatsoratra rehetra zarainay dia miavaka amin'ny Martech Zone. Ary na ny infografika aza dia navoaka miaraka amina fampidirana tokana sy ny 2 cents ao aminy. Ry vahoaka… aza alaim-panahy handray lahatsoratra bilaogy vahiny. Tetikasa azo inoana indrindra fa hahazoana rohy vitsivitsy apetraka amin'ny tranokalanao fotsiny izy ireo. Mampidi-doza ny asa mafy rehetra vitanao. Aza alaim-panahy!
Aleoko mandingana andro iray amin'ny famoahana toy izay mametraka tranonkala misy ezaka mandritra ny folo taona ao aminy!
Tags: Google +toeranamatt cuttsfikarohana OptimizationSEOlahatsoratra manohana
Ahoana ny fivoaran'ny fitokisana sy ny fitondran-tena amin'ny fividianana an-tserasera
Aug 28, 2014 amin'ny 2: 38 AM
Angano no lazainao fa antenaiko. Tsy hoe maty ny lahatsoratra napetraka fa tsy misy ifandraisany sy tombony ratsy azo inoana fa maty aho mino !!
Aug 28, 2014 amin'ny 11: 09 AM
Lahatsoratra tsara Douglas! Manaiky izay rehetra nolazainao aho ary tsy maintsy milaza fa tsara dia mbola avelanao ny toeran'ny mpitsidika (ireo tsara indrindra, mazava ho azy). Nahita tranokala maro aho izay nanapa-kevitra ny tsy hanaiky ny fandefasan'ny vahiny izay mety, saingy angamba tsy hahita fotoana mety izy ireo.